तपाईं अमेजन मार्केटिंग उपकरण कसरी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ?
यो छोटो पोष्ट अमेजन मार्केट उपकरण अर्थात् अर्थात् AMS को समर्पित छ। "प्रतिस्पर्धी अंतरिमता" को कारण यो विषय छलफल गर्न महत्त्वपूर्ण छ किनकि हाम्रो दिनमा अमेजनमा सबैभन्दा अधिक व्यापारी व्यापारीहरूसँग सामना गर्दछन्।
अमेजन मार्केटिंग सेवा (एएमएस) धेरै लाभहरु संग अनलाइन विक्रेताओं लाई प्रदान गर्दछ र उनलाई उनको प्रतियोगिहरु देखि बाहिर खडा गर्न को अवसर दिनुहोस र अमेज़न खोज परिणाम पेज मा आफ्नो उत्पादनहरु लाई उच्च स्थान दिनुहोस।
प्रत्येक अनुभवी अमेजन बजारमा थाहा छ कि तपाईंको सूचीमा प्रत्येक क्लिकमा खरीदको मतलब हुन सक्छ। यही कारणले यो महत्त्वपूर्ण छ कि अमेजन मार्केटिंग टूल कसरी प्रयोग गर्न को लागी पर्याप्त लाभ प्राप्त गर्न को लागी।
तपाईंलाई अमेजन मार्केटिंग उपकरण किन प्रयोग गर्न आवश्यक छ?
मैले अमेजन भन्दा पहिले उल्लेख गरेको छु कि एक धेरै प्रतिस्पर्धात्मक बजार हो जहाँ तपाईंको आला प्रतियोगिहरूको प्रायः एकल क्लिक टाढा हो, र तपाइँ सबैले त्यस्ता फाइदाहरू प्रदान गर्दछ र उही कमजोर अंकहरू छन्। अर्को शब्दमा तपाईं गर्दन र गर्दन जाँदै हुनुहुन्छ तपाईका बजार आला प्रतिद्वंद्वीहरू र अमेजनमा किनेको बक्स जित्ने त्यस्ता मौकाहरू छन्। तपाईंको सम्भावनात्मक ग्राहकले तपाईंको प्रतियोगीको पृष्ठमा क्लिक गर्न सक्छ, र तपाइँ एक पलमा बिक्री हराउनुहुनेछ। खोजकर्तालाई निश्चित रूपमा तपाईंको उत्पादन छनौट गर्न पक्का गर्नको लागि तपाईंसँग 10 सेकेन्ड सम्म पुग्नु हुन्छ।
अमेजन मार्केटिङ सेवाले तपाईंलाई अधिक सम्भावित ग्राहकहरूलाई आकर्षित गर्न र अमेजनमा ब्रान्ड दृश्यता बढाउन सहयोग गर्नेछ। यसबाहेक, यसले लक्षित उद्देश्यलाई प्रयोगकर्ताहरूलाई प्रयोगकर्तालाई खरीद गर्न विभिन्न चरणहरूमा अनुमति दिन्छ। यसले तपाईंको ब्रान्डमा अमेजनमा अतिरिक्त इन-मार्केट बिक्रेताको अगाडिको क्षमता प्रदान गर्दछ।
हेडलाइन विज्ञापन ब्रान्डिंग, प्रायोजित उत्पाद लक्षित प्रयोगकर्ताहरु को भूमिका निभािन्छ जो एक विशेष उत्पादन मा रुचि राखछन। त्यस्ता उत्पादन प्रदर्शन विज्ञापनहरूलाई सम्भावित ग्राहकहरूलाई तपाईंको अमेजन खरीदारीको वातावरण भित्र राख्न मद्दत गर्दछ।
Amazon मार्केटिंग सेवाहरु को तीन मुख्य अमेज़ॅन विज्ञापन प्रारूप मा विकसित गरियो:
Amazon प्रायोजित उत्पादन विज्ञापन
यी सबै विज्ञापन ढाँचाहरू अमेजन रूपान्तरित फर्नल्यान्डमा उनीहरूको स्थान छ। एक विजेता विपणन रणनीतिको लागि यी तीनवटा कार्यहरू साथै प्रत्येक अभियानको फरक लक्ष्यीकरण प्रकारहरू चाहिन्छ।
शीर्षक खोजी विज्ञापनहरू
हेडलाइन खोजी विज्ञापनहरू बिक्री फ्यानलको शीर्षमा आधारित छन्। यो पहिलो कुरा हो प्रयोगकर्ता खोजी खोज पृष्ठमा हेर्छन् र खोजकर्ताहरूले निर्णय खरिद गर्न प्रभाव पार्छन्। उनीहरु ब्रान्डेड र सामान्य श्रेणीका खोजीहरूको लागि उत्तम हुन्छन्। हेडलाइन खोज विज्ञापनहरू प्राय: अनुकूल पाठ शीर्षक र धेरै सम्बन्धित उत्पादहरू छन्। उनीहरूले लक्षित खोज सर्तहरू र सामान्य प्रश्नहरूको लागि सबै भन्दा राम्रो सेवा गर्छन्। तपाईं आफ्नो लक्षित दर्शकहरु संग आफ्नो खोज को शुरुआती शुरुवात संग बातचीत गर्न को अवसर दिनुहोस।
हेडलाइन सर्च विज्ञापन को मौलिक लाभ को व्याख्या गर्न को लायक छ .यो उत्पादन विवरण पृष्ठ को तुलना मा केहि केहि को क्लिकहरु लाई सीधा करने को क्षमता हो। तपाईले तपाइँका क्लिकहरू त्यस्ता यूआरएल प्रकारहरू अनुकूलन URL, ब्रान्ड पेज, ब्रान्ड पृष्ठ, खोज नतिजा पृष्ठ र उत्पादन पेजको रूपमा पठाउन मौका पाउनुहुन्छ।
प्रायोजित उत्पादन विज्ञापन
प्रायोजित उत्पादन विज्ञापन दुई प्रकारका हुन सक्छ। - स्वचालित र म्यानुअल। पहिलो पहिलो हो टेंट चलाईयो, जबकि दोस्रो एक कुञ्जीशब्द चालित छ। यी विज्ञापनहरू अमेजन खोज परिणाम पृष्ठको शीर्ष वा तल्लोमा राखिएको बेलामा तपाइँ डेस्कटप र उत्पादन विवरण पृष्ठ प्रयोग गर्नुहुन्छ जब तपाइँ मोबाइल उपकरण प्रयोग गर्नुहुन्छ। प्रायोजित उत्पादन विज्ञापनहरू मध्य-को-फ्र्यानल विज्ञापनहरूको रूपमा मानिन्छ किनभने तिनीहरू सम्भावित ग्राहकहरूको सामने देखा पर्दा तिनीहरू खरीदका लागि विभिन्न विकल्पहरू तुलना गर्छन्।
यी विज्ञापनहरू केवल बिक्रेताहरूका लागि मात्र अमेजनमा सबै तेस्रो पक्षका विक्रेताहरू उपलब्ध छन्। तपाई तुरुन्तै तिनीहरूलाई सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ र तुरुन्तै अनुमोदन प्राप्त गर्नुहुन्छ।
यो विज्ञापन अभियान Google खरीदारी जस्तै हो जुन विज्ञापनहरू विशेष उत्पादनको लागि हुन्। यसबाहेक, अमेजनले प्रयोगकर्ताका क्वेरी, मूल्य निर्धारण नीति, समीक्षा र बिक्रीको इतिहासमा तपाईंको उत्पादनको प्रासंगिकतालाई पनि खातामा लिन्छ।
यो भन्दा राम्रो हो कि तपाईं स्वचालित र म्यानुअल लक्ष्यीकरण प्रकारहरू बीच छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। Source .जब तपाईं आफ्नो विज्ञापन स्वतः स्वचालित रूपमा चलाउनुहुन्छ, अमेजनले तपाइँको उत्पादन विज्ञापनहरूसँग सान्दर्भिक खोज सर्तहरूसँग मेल खाने उपलब्ध जानकारी प्रयोग गर्दछ। यदि तपाइँले तपाइँको विज्ञापन मैन्युअल रूपमा भाडा गर्नुभयो भने, तपाइँ खोज सर्तहरूको सूची अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ जसको द्वारा तपाई आफ्नो उत्पादन विज्ञापनहरू लक्षित गर्न सक्नुहुनेछ। म्यानुअल अभियानहरूमा उच्च लागत प्रति क्लिक छ, तर अझ राम्रो लक्षित लक्ष्यहरू प्रदान गर्नुहोस्, जबकि स्वतन्त्र अभियानहरू सजिलै सिर्जना गर्न सकिन्छ र खोजीकर्ताहरूको विस्तृत संख्यामा देखा पर्न सक्छ।
म म्यानुअल वा स्वचालित उत्पादन विज्ञापनहरूको लागि पनि मतदान गर्न सक्दिन। तिनीहरू दुवै आफ्नो व्यवसायको लागि फायदेमंद छन्, त्यसैले म दृढतापूर्वक तिनीहरूलाई जटिलमा प्रयोग गर्न सिफारिस गर्छु।
अमेजन प्रायोजित उत्पादनका लागि प्राथमिक आवश्यकताहरूमध्ये, हामी निम्न व्यक्तिहरूलाई फरक गर्न सक्छौं:
एक सक्रिय अमेजन व्यावसायिक विक्रेता खाता;
संयुक्त राज्य को क्षेत्र मा सबै ठेगानाहरु लाई जहाज को क्षमता;
तपाईंको उत्पादनहरु को सूची लिस्टिंग धेरै उपलब्ध श्रेणियों मा आधारित हुनु पर्छ;
तपाईंको रिटेल मात्र नयाँ र मूल उत्पादन गर्नु पर्छ;
तपाईंको विज्ञापन केवल सूचीबद्ध को लागी कि खरीद खरीद बक्स को लागि उपलब्ध हुनु पर्छ। अन्यथा, तपाईको विज्ञापन अमेजनमा तपाइँको सम्भावित ग्राहकहरूमा प्रदर्शित हुनेछैन।
तपाईले निम्न उत्पादनहरू मध्ये एक - यूएस, बेलायत, क्यानाडा, जर्मनी, फ्रान्स, स्पेन, इटाली र चीनमा आफ्नो उत्पादनहरू खानुपर्छ।
उत्पादन प्रदर्शन विज्ञापन
उत्पादन प्रदर्शन विज्ञापन बिक्री फन्नेल को तल मा आधारित छ र केवल उत्पादन विवरण पृष्ठों मा देखाईएको छ। तपाइँको संभावित ग्राहकहरू खरिद गर्न को लागी तपाईंको अन्तिम अवसर हो।
यो प्रकारका विज्ञापनहरू ग्राहकको खरिद गर्न वा हालको वा अघिल्लो प्राथमिकताहरू द्वारा उत्पादित प्रकारको द्वारा लक्षित गर्न सकिन्छ। उत्पाद लक्ष्यीकरणले तपाइँलाई तपाइँको विज्ञापन राख्नु पर्ने चाहानुहुन्छ कुन उत्पाद पृष्ठहरू निर्धारण गर्ने मौका दिन्छ। उदाहरणका लागि, तपाईं आफ्नो उत्पादनको आला प्रतियोगी पृष्ठमा आफ्नो उत्पादनहरू प्रदर्शन गर्न सक्नुहुनेछ, अमेजन खोजीहरू लाई उचित मूल्यमा अवधारणात्मक वस्तुहरू प्रदान गर्नुहोस्। तथापि, यो उत्पादन लक्ष्यीकरण गहराईमा सीमित छ भनेर भन्न योग्य छ किनभने तपाइँ चीजहरू छनौट गर्न चाहानुहुन्छ जसका लागि तपाईका विज्ञापनहरू देखा पर्दछ।
यस अवधिमा, ब्याज लक्ष्यीकरणले अधिक स्थानमा ढाक्न सक्छ तर कम कम प्रासंगिकताको साथ। यस प्रकारको विज्ञापनहरू प्रयोग गर्दा तपाइँ प्रयोगकर्ताहरूको लागि आफ्नो उत्पादनहरू देख्न सक्नुहुनेछ जो एक विशेष वर्गको उत्पादन वा समान श्रेणी भित्र सम्बन्धित वस्तुहरू हेर्न।